यर्मा : भिक्टर, तिमीले हामी सानो हुँददाखेरि मेरो कम्मर समाएको सम्झन्छौ ? के हुन्छ भनेर कसलाई के थाहा है ?
भिक्टर : सबै कुरा बदलिन्छ ।
यर्मा : अहँ ! कुनै कुरा बदलिँदैन । पर्खाल पछाडि लुकाएका कुराहरु केही पनि बदलिँदैनन्, किनकि तिनीहरुलाई कसैले देखेकै हुँदैन ।
भिक्टर : सायद !
यर्मा : भोलि फेरि तिनीहरु बाहिर निस्किएर चिच्चाउन थाले भने, तिनीहरुको चित्कारले संसार थर्कन्छ ।
उल्लेखित संवाद काठमाण्डौको थिएटर भिलेजमा शनिबारबाट सुरु भएको नाटक ‘यर्मा’को हो । संवादमा ‘यर्मा’ पात्रको भूमिका निर्वाहा गर्ने कलाकार नायिका नम्रता श्रेष्ठ हुन् । ‘भिक्टर’ पात्रको भूमिका कलाकार कमलमणि नेपालले निर्वाह गरेका छन् ।
यो नाटकलाई सृष्टि भट्टरार्इले अनुवाद गरेकी हुन् । वन वर्ल्ड थिएटरको प्रस्तुतीमा थिएटर भिल्लाको सहकार्यमा नाटक मञ्चन सुरु गरिएको हो । स्पेनका चर्चित नाटककार फ्रेडेरियो गार्सियो लोर्काले लेखेको नाटकलाई ८० बर्षपछि बिमल सुवेदीले नेपालको रंगमञ्चमा मञ्चन गरेका हुन् ।
स्पेनमा भेडा गोठालो गर्ने एक परिवारको कथालाई नाटकले प्रस्तुत गरिएको छ । नाटकमा अभिनय गरेकी नम्रताको उपस्थित दर्शकले प्रशंसा गरेका छन् । नाटक एक घन्टा ३० मिनेट लामो छ ।